Cart Carte Asa - Asa - Travel
Navoaka tamim-pahombiazana ny famoahana ary nalefa ao amin'ny tranokalanay. Misaotra anao!
Ankehitriny: Soraty maimaim-poana ny CV 100% maimaim-poana!
* Ampidiro amin'ny Mpikera Mpanatanteraka
Ny fampahalalana avy amin'ity fizarana ity dia halefa mivantana amin'ny tranokalanay!
Ampahafantaro ny tena amin'ny lalana marina!*
Fahaiza-manao sy kalitao - Fisarahan'i Comma (mpitantana, varotra, injeniera)*
Ity no teny manan-danja ao amin'ny mombamomba anao, izany no hahitan'ny mpandray mpiasa anao avy amin'ny Google
Lohatenin'ny asa matihanina amin'ny famintinana famintinana:*
Ity no lohateninao amin'ny mombamomba anao, izay no hahitan'ny mpandray mpiasa anao avy amin'ny Google
** Aza adino ny manampy ny antsipiriany mifandray aminao raha mandefa taratasy fampidirana nomeraon-telefaona sy mailaka.
* Zava-dehibe ny teny 350 kely indrindra! - Ity no toerana ilainao hifantohana indrindra mba hahazoana asa ao Dubai!
* Azonao atao koa ny manampy Rohy mankany amin'ny LinkedIn, mombamomba ny tranokalan'ny Facebook na tranokala manokana.
Taratasy fampidirana ohatra:
Ry Hr Managers malala,
Katherine Sussman no anarako, ary mpiara-miasa amin'ny asa famandrihana XYZ aho. Efa telo taona lasa aho no niasa.
Tiako ny hifindra avy amin'ny asa fanaratoana amina orinasa lehibe mankany amin'ny asa fakana vola anatiny. Efa niasa tamin'ny fampandrosoana ho an'ny ABC Nonprofit aho ary te hitondra ny fahaizako ankehitriny amin'ny tsy mitady tombony hafa. Fantatro fa manao io asa io ho an'ny Sunshine Nonprofit ianao, ary tiako ny mandre kely momba ny zavatra niainanao tamin'ity sehatra ity. Tiako ny mandamina fotoana hihaona aminao amin'ny dinidinika fampahalalana.
Napetrako ny tohizako amin'ny famerenanao. Raha manana fotoana fohy hanaovana resaka fohy ianao dia mba ampahafantaro ahy. Afaka mifandray amiko ianao amin'ny alàlan'ny mailaka (ksussman@email.com) na telefaona (555-555-5555). Manantena valiny avy any aminao. Misaotra anao indrindra.
Ady an-tariby miaraka amin'ny laharan'ny firenena
Ampidiro ny sarinao
Ampidiro ny rakitra eto na tsindrio hifantina
Ny toerana apetraka? Mifantena azafadyMpiandraikitra ambonyManagermpiasasolontenan'nyTsy nisy mpiasa za-draharaha
Mampihatra ve ianao? Mifantena azafadyFotoana fenoTapak'andro
Fanabeazana sy antsipirian'ny traikefa
Ny anarana diplaoma / Degree
Anaran'ny College / University
Salary maniry amin'ny USD
Volana / taona
(ohatra: 3 volana, 2 taona sns)
Salary ankehitriny amin'ny USD
Detail an'ny orinasa ankehitriny
Fohy fohy amin'ny zavatra niainanao:*
Cover Letter + Certificat
Manana Visa any UAE aho
Upload Upload CV maimaim-poana
$ 9.99 Ho hita tanteraka ny CV anao!
* Free! Izahay no mametraka ny fanamarihana fampidirana mivantana ao amin'ny fizarana "NEW JOINERS".
* $ 4.99 ny zava-drehetra amin'ny safidy maimaim-poana + Ny tompon'andraikitry ny HR sy ny Tale anao dia hijery ny CV anao ary ataontsika hita maso ny masoivohon-tsika any Dubai, ny mpikambana mpikambana ao amin'ny UAE ho toy ny expat premium.
* $ 9.99 Izahay dia mametraka CV feno ao amin'ny vavahadin-tserasera, ka dia hitodika any amin'ny CV ny tompon'andraikitra sy ireo tompon'andraikitra ao aminay ary hataonay antoka fa ho lasa premium any amin'ny UAE, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait ary firenena maro hafa ny mpitantana sy HR.
Ny form dia apetraka am-pahombiazana. Misaotra anao!
Hanavao ny mombamomba anao hanana 100%
atao hoe koa:
Fiakarana 4.99 $
$ 9.99 Fanomezana feno
Atolotra am-pahombiazana ny lahatsoratra. Misaotra anao!
Mametraka lahatsoratra & Cheers mankany Dubai
Tianao ve i Dubai? - Ankehitriny ianao dia manana fotoana hanoratana lahatsoratra na lahatsoratra fohy ary lava ela ho an'ny United Arab Emirates.
Soraty ny teny nosoratanao tsy misy fetra! Alefaso ny vibes tsara!*
Teny fanalahidy ho an'ny lahatsoratrao:
Mampisaraka an'i Comma - Dubai, ny orinasako, Fiainana,
* Eny, azonao atao ny mampiditra rohy ao amin'ny tranonkalanao!
* Ny lahatsoratrao dia halefa amin'ny tranokalanay, ka afaka hahita izany ny mpitantana orinasa sy ny olon-kafa.
* Ny lahatsoratra dia tsy maintsy manana teny farafaharatsiny amin'ny teny 500 fa ny rohy dia Dofollow!
Serivisy SEO SEO ho an'ny faritra Atsinanana!
Alefaso ny sary!
* Free! Izahay mandefa lahatsoratra / naoty fohy mipetraka mivantana amin'ny faritanay "FAHAGAGANA VAOVAO".
* $ 9.99 ny zava-drehetra amin'ny safidy malalaka + Ny mpitantana ny Marketing anay dia hijery ny votoatinao ary ho azonay antoka fa hita maso ny lahatsoratrao sy ny rohy misy anao any Dubai, ireo mpikambana ao amin'ny UAE ary ny lahatsoratrao dia mety manana teny 2,000.
* $ 29.99 Izahay namoaka ny lahatsoratrao sy ny endrikao ho an'ny tanjona SEO. Noho izany, ny roboto Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo dia hijery ny votoatinao amin'ny fomba tsara ary ataonay antoka fa lasa voky tanteraka ny UAE, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, ary ireo firenena Afovoany Atsinanana hafa. (* Teny tsy misy fetra)
Alefaso maimaimpoana ny lahatsoratra!
$ 9.99 hita maso any Dubai, hatramin'ny teny 2,000!
$ 29.99 Lahatsoratra famolavolana feno ho an'ny tanjona SEO any Afovoany Atsinanana.
Lahatsoratra lahatsoratra & Link!
Ny sariety foana amin'izao fotoana izao.
Miverena any miantsena
Ity modely ity dia manohana ny sarin'ny sidebar. Ampio iray na ampiasao ny lamina feno Width.
Copyright © 2019 Company Dubai City. Zo rehetra voatokana